Northgard: zano revhidhiyo mutambo neVikings zveLinux | Linux Vakapindwa muropa
Northgard: Iyo Vikings Strategy Vhidhiyo Mutambo weLinux
Northgard mutambo wakanaka wevhidhiyo waunowana mune yakakurumbira Valve chitoro, chiutsi. Sezvakavimbiswa uye zvakaziviswa paLxA, ikozvino yave kuwanikwa yeLinux, saka zita idzva rekuwedzera kune iyo runyorwa rwemavhidhiyo mitambo inowanikwa kune yedu distro. Shiro Mitambo yakachengeta izwi rayo uye nekuwedzera iwo mutambo wevhidhiyo unozosanganawo nezvatinotarisira isu kubva kuchirongwa chevhidhiyo mutambo wakadai
Vanoratidzika kunge vaive nenyaya dzekutanga dzekutanga, asi Chasvika uye ndinofungidzira kuti vanozoinatsa zvakanyanya nekufamba kwenguva. Vamwe vakatozviedza vakave nemataurirwo akanaka, asi zvinoita sekunge chiri kukonzera mamwe matambudziko ndepakuzviita pane mamwe magovana eGNU / Linux, nekuti tinogona kuona kuti mamwe mapakeji anodikanwa kuti tikwanise kuivhura. Iwo mapakeji ari iyo wayland graphical server, wayland-egl, uye libbsd raibhurari. Zvirokwazvo iro harisi dambudziko rakakura kwazvo, akaiswa uye ndizvozvo, zvakare mamwe akawanda mapakeji ane kutsamira kwavo kunofanirwa kugutswa ... Hakusi kuguma kwenyika. Asi kwete chete pane zvataurwa zve ivo vatambi, sezvo vazhinji vari kuzivisawo kuti havagone kutamba vatambi vakawanda nekuti vanoda kiyi «466560» mukati meiyo steam_appid.txt faira, saka isu tichafanirwa kuiwedzera neyemavara edhita kana neiri nyore echo.
Kana mutambo uchinge wave kumhanya nematambudziko ekutanga ayo andinofungidzira kuti vagadziri vawo vachagadzirisa munguva pfupi, tinogona kuona mamishinari totanga kutamba. Uye ndopazvinokanganikwa zvese izvi kana ona kunaka kwakaita zita reNorthgard kune vanoda zano. Zvimwe zvezvinhu zvinoonekera pamusoro pazvo ndezvekuti iwe unokwanisa kushandura chero mugari wemumusha kuva murombo kana kumudzidzisa kuti ave murwi, achisiyanisa kubva kune mimwe mitambo iyo yaunotogadzira imwe nhoroondo uye iwe haugone kuichinja ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Northgard: Iyo Vikings Strategy Vhidhiyo Mutambo weLinux
Google Codes Uyezve: iyo yakavhurwa sosi imwe kero yepositi
Chinja PDF kuIzwi kubva kuLinux